Xijaar oo TikTok wax-qabad uga dhigaya bulshada | KEYDMEDIA ENGLISH
Xijaar oo TikTok wax-qabad uga dhigaya bulshada
Taliyaha Boliska Xijaar, ayaa lagu eedeeyay inuu hareer maray howlihii u yaallay ee sugidda amniga, isla-markaana uu bulshada wax-qabad uga dhigayo baacsiga dhallinyarada isticmaasha TikTok.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya, Cabdi Xasan Xijaar, ayaa todobaadkaan ku dhawaaqay howl-gal ka dhan ah, dhallinyarada sida qaldan u isticmaala barasha bulshada, gaar ahaan Application-ka TikTok, kaas oo labadii sano ee la soo dhaafay ay si weyn ula qabsadeen dhallinyarada ku dhaqan Caasimadda.
Wuxuu carabbaabay in la diyaariyay ciidan gaar ah oo baacsada dhalliyarada sida anshaxa ka baxsan u isticmaala TikTiok, wuxuuna xaqiijiyay in ay hirgalinta arrinkaas garab kaga helayaan Wasaaradda Diinta iyo Owqaafta ee XFS iyo Maamulka Amniga ee Gobolka Banaadir.
Hayeehsee, tallaabada Xijaar, ayaa ku soo aadeysa xilli inta badan shacabka ku dhaqan degmooyinka Gobolka Banaadir, ay qarka u saaran yihiin ka quusashada u bixidda bannaanka sababo la xariira amniga, waxaana Xijaar, lagu dhaleeceeyay inuu gabay waajibaadkii koobaad ee ah sugidda amniga shacabka.
Degmooyinka ay ka mid yihiin Kaaraan, Yaaqsiid, Hilwaa, Kaxda iyo degaanno hoos taga, ayay bulshada ku dhaqan billaabeen in ay xilli hore alabaabada isku dhuftaan xarumahooda ganacsi, si ay kaga badbaadaan koox burcad ah oo Caasimadda caan ka noqotay bastooladana ku hubeysan, kuwaas oo si bareer ah jidadka ugu dhaca dadka.
Shaqsiyaad kala duwan, oo dhawaan siyaabo kala gadisan agab ay wateen, [Teleefanno, Kumbuyuutarro iyo lacag] looga dhacay degmada Hodan, oo Keydmedia Online la ahdlay, ayaa Xijaar iyo Maamulka Gobolka Banaadir ku eedeeyay gudasha la’aanta waajibaadka ka saaran Amniga.
Inkastoo, la bogaadiyay in laga hor tago falalka ka baxsan anshaxa diinta iyo dhaqanka Soomaalida, hadana si guud Xijaar iyo kooxdiisu, waxa ay indhaha ka qarsanayaan amniga faraha ka baxay ee Caasimadda, waxayna bulshada wax qabad uga dhigayaan TikTik.
Bilowgii sanadkaan waxaa Muqdisho ka dillaacay dhac ay geysanayaan shaqsiyaad ku labisan deriiska ciidanka, isla-markaana ku hubeysan bastolado, kuwaas oo ku socdaala mootooyinka labada lug leh ee xawaaraha dheereeya.